Xukumadda Soomaaliya oo dhaqaalihii ugu horeeyay ka heshay shidaal
Soomaaliya oo dhaqaalihii ugu horeeyay ka heshay shidaal
MUQDISHO – Soomaaliya ayaa markii ugu horeesay. Muddo 30 sano ah dhaqaale ka heshay shidaalka iyo kheyraadka kale ee ku jira dalka.
Dowladda federaalka ee Soomaaliya oo sanadihii dambe ku hawlaneyd. Sidii looga faaideysan lahaa kheyraadka dalka oo dhawaan. Kaas oo la filayo in la soo bandhigo xajmiga uu la egyahay qeybihii sahanka lagu sameeyay.
Kadib dadaalo badan oo ay madaxda wasaaradda batroolka iyo macdanta dowladda federaalka ee Soomaaliya. Ay ka samayeen dib u soo celinta xiriirka shirkadaha ku leh xirmooyin shidaal iyo kuwo kale oo maal gashi cusub ka samaysta Soomaaliya. Ayaa waxaa lagu guulaystay in lagu qanciyo shirkadahaas lagu leeyahay ijaarka xirmooyinka ay haystaan.
Sidaas waxaa BBC-da u sheegay wasiir ku xigeenka wasaaradda Batroolka iyo macdanta ee dowladda federaalka ee Soomaaliya. Maxamuud Cabdiqaadir Hilaal.
Waxaa uu inta raaciyay. In heshiis ku saabsanaa bixinta ijaarka xirmooyin Shidaal oo ay galeen wasaaradda batroolka iyo macdanta iyo Shirkadaha Shell/Exxon Mobil bishii Juun ee Sanad kan. Ayna shirkadahaas na ay dowladda federaalka u shubeen lacag dhan 1.7 milyan oo doolar.
Wasiir ku xigeenka ayaa sidoo kale ka hadlay. Qaabka lacagahaas ay u qeybsan doonaan dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada. Maadaama ay horay ugu heshiiyeen qeybsiga kheyraadka dalka ee heshiiskii Baydhabo.
“Maamulka Lacagtan ayaa ku salaysnaan doona heshiiskii kheyraad wadaaaga ee ay kala saxiixdeen Dowladda Federaalka iyo maamul goboleedyada”. Ayuu shaaciyay wasiir Ku xigeenka batroolka iyo macdanta ee Dowladda Federaalka. Maxamud Cabdiqaadir Hilaal.
Bil kahor ayay ahayd markii shir lagu lafa gurayay. Sida looga faa’ideysanayo kheyraadka shidaalka uu leeyahay dalka Soomaaliya oo ay soo abaabushay wasaaradda macdanta iyo batroolka ee dowladda federaalka Soomaaliya lagu qabtay magaalada Addis Ababa.
Shirka waxaa ka soo qeyb galay. Dhammaan maamul-goboleedyada iyo khuburo dhanka shidaalka ah oo ka socda dalka Norway. Waxaana diiradda lagu saarayay diyaar garoowga soo saarista kheyraadka Soomaaliya gaar ahaana shidaalka.
Wasiir ku xigeenka wasaaradda macdanta iyo batroolka Soomaaliya. Maxamuud Cabduqaadir Hilaal oo BBC-da u warramay xiligaas. Ayaa sheegay in shirka uu ahaa mid wax ku ool ah ayna muhiimadiisu ahayd in aqoon ahaan iyo xirfad ahaanba la fahmo loona diyaar garoobo qaabka loo soo saarayo iyo nooca uu yahay shidaalka.
Maxamuud Cabduqaadir ayaa sidoo kale sheegay. In laga gaashaamanayo in marka shidaalka la soo saaro uusan khatar ugu noqon dadka iyo bayaduba.